Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Maalim Salman
Macalim Salmaan waxaa xulay hoggaamiyihii al-Shabaab ee hadda geeriyooday ee Axmed Cabdi aw-Maxamed (Godane) inuu noqdo madaxa dagaalyahaniintaa shisheeye Afrikaanka ee al-Shabaab. Waxaa loo tabbaray howlaha al-Shabaab ee aan Soomaali ahayn oo wuxuu kaalin ka qaatay howl-gelinta Afrika oo lagu bartilmaameesanayo dalxiisayaasha, meelaha lagu maaweesho, iyo kaniisaddaha.
Inkastoo ahmiyaddiisa ugu wayn ah ahayd howl-gelinta meel Soomaaliya ka baxsan, Salmaan waxaa la ogyahay inuu deggan yahay meel Soomaaliya ka baxsan oo dagaalyahaniintaa shisheeye uu Soomaaliya dhexdeeda ku tabbarro kahor inta aysan meel kale loo gudbin. Weerarrada argaggixisonimada kale ay geysteen, al-Shabaab waxay mas’uul ka ahaayeen weerarkii dhacay bishii Seteember 2013 oo lagu qaaday Suuq Waynaha Westgate Mall ee Nayroobi, Keenya kaasoo ay ku dhinteen dad gaaraya kudhowaad 65 qof.
Naanays: Macalim Salmaan, Mucalim Suleymaan, Amiir Salmaan